Filtrer les éléments par date : mercredi, 11 novembre 2020
mercredi, 11 novembre 2020 20:12
Pilo kely : Politika gasy, zaza an-trano, zaza an-tany
Rehefa ilaindreo ianao dia haindreo numéro sy lava-tranonao, fa rehefa azondreo raha ilaindreo,zaza an-tany ianao zay, mandefitra, miandry anaty couloir na antokontany, fa mbo misakafo ny zaza an-trano, téléphone-ndreo maty aby.
Compte fake jiaby reo, zaza an-tany aby, maro miandry volandreo antokontany. Mbola tsy tonga mpizara vola,mipody koa ampitso, miandry instruction anaty groupe secret fb, ampitoviana aby ny com sy ny olona attaqué na. Midira fa manintsy any ivelany any.
mercredi, 11 novembre 2020 20:02
Anivorano Avaratra : Ravan’ny Zandary ny andian-jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana
Tra-tehaky ny Zandary ireo jiolahy telo voarohirohy tamin'ny vaky trano tao amin'ny Kaominina Anivorano Avaratra, Distrika Antsiranana II, taorian'ny fahazoana ny loharanom-baovao avy tamin'ny tsara sitrapo.
Tratra tany amin'izy ireo fitaovana maromaro fampiasan'izy ireo mamaky trano, sy ny basy mahery vaika iray, miaraka amin'ny bala 29, ary basim-borona iray, an’ny jeneraly nisotro ronono izay Ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao.
Fitaovana anisany lasan'ireo jiolahy nandritra ny fahavakisan-tranony tany an-toerana ireo.
mercredi, 11 novembre 2020 19:56
11 novambra : Fahatsiarovana ny fampitsaharana vonjy maika ny ady lehibe voalohany
Nomarihina manokana tetsy amin'ny tsangam-bato farihin'Anosy Antananarivo ny fitsingerenan'ny 11 novambra 1918, daty nampitsaharana vonjy maika ny ady lehibe voalohany, ka nampilavo lefona ny Alemana, ary fanamarihana ny fandresena sy fahatsiarovana ireo Frantsay, sy ireo Malagasy niady sy lavo teo anilan'ny La Frantsa.
mercredi, 11 novembre 2020 13:44
Famatsian-drano : Miantso vonjy ny mponin’Ambatolampy Antehiroka
Misedra olana amin’ny rano fisotro ary velon-taraina ny mponina eny Ambatolampy Antehiroka. Lany fotoana andro aman’alina, amin’ny fiandrasana rano ho tonga amin’ny paompy ny olona ka miantso vahaolana fa efa miantraika amin’ny fahasalamana izy ity, ary mampisavorovoro.
mercredi, 11 novembre 2020 13:40
Toetr’andro : Hanomboka ny taom-pahavaratra eto Madagasikara
Misy rindrindrahona lehibe ao Atsimon’ny Madagasikara izay manakorontana tanteraka ny atmosfera ; fambara manokana amin’ny fanombohan’ny taom-pahavaratra eto Madagasikara ny fisian’izany, araka ny fanazavan-dry zareo avy amin’ny Sampana mpamantatra ny toetr’andro.
Vinavinaina hisitraka oram-pahavaratra manomboka ny Alakamisy 12 Novambra 2020 ny faritra maro eto amin’ny Nosy, indrindra ny ety amin’ny afovoan-tany ; haharitra hatramin’ny fiafaran’ny herinandro izany.
Arahina na ialohavana tafiotra ny rotsakorana amin’ny faritra sasany.
mercredi, 11 novembre 2020 12:06
Le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, qui met provisoirement fin aux combats de la Première Guerre mondiale, et la commémoration de la Victoire et de la Paix et l'Hommage à tous les morts pour la France.
(Voir Photo Suite)
mercredi, 11 novembre 2020 11:33
Faritra Atsinanana : Fanofanana Ben’ny tanàna sy Mpanolo-tsaina ary Mpitam-bolan’ny kaominina
Maro amin’ireo Ben’ny tanàna sy Mpanolo-tsaina kaominaly, anatin’ny Kaominina 90, ato amin'ny faritra Atsinanana ka ivelan’i Toamasina, no vao mandray andraikitra voalohany.
Ka noho izany, manampy ny mety ho fampiofanana nomen’ny Sampandraharaham-panjakana tamin’ny Kaominina sasantsasany, dia raisin’ny Faritra Atsinanana ho adidy ny mampisitraka fanofanana tompon’andraikitra miisa 270 notsongaina tanatin’ny maro manerana ny Distrika enina ivelan’i Toamasina 1.
Ka ny ONG LOMAGNORANO no nisahana sy nikarakara izany fampihofanana isaky ny renivohitry ny Distrika izany.
Tompon’andraikitra manodidina ny 800 no voakasika sy hisitraka izao andiam-panofanana izao.
Faritra Atsinanana : Ivon-toeram-panofanana mpampianatra eto Mahanoro (CRINFP) namoaka ny andihany faha-6
Namoaka ny andiany faha-6 na ny 6ème Promotion mitondra ny anarana EZAKA ka nisafidy ny Governora Daritra Atsinanana RAFIDISON Richard Théodore ho « Ray mpiahy na Parrain ».
Notontosaina ny alatsinainy 09 Novambra ny lanonana famoahana na « sortie de promotion ».
Ny Promotion EZAKA dia tanora miisa 92 vita fiofanana ho mpampianatra rehefa avy niofana nandritra ny 02 taona.
Hoy Andriamatoa Governora : « Nanaiky ho Ray mpiahy an’ity andiany ity ny tenako satria manan-danja loatra amiko ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana, no sady laharam-pahamehana amin’ny Fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Andry Nirina RAJOELINA, ao amin’ny VELIRANO FAHA-4 ».
mercredi, 11 novembre 2020 11:08
Tsenaben'ny Fizahantany : Mpitsidika maherin'ny 5 000 no andrasana eny amin'ny zaridainan'Antaninarenina
Hotanterahina ny 12-13-14 novambra 2020 eny amin'ny zaridainan'Antaninarenina, ny hetsika "Tsenaben'ny Fizahantany", izay karakarain'ny Ministeran'ny Fitaterana, ny Fizahantany ary ny Famantarana ny toetr'andro (MTTM), sy ny Ofisim-pirenena misahana ny fizahantany (ONTM).
Mpitsidika maherin'ny 5 000 no andrasana mandritra ny 3 andro aharetan’ny hetsika. Misandrahaka amina tranoheva miisa 17 kosa ireo matihanina amin'ny fikarakarana 32 fivahinianana mandray anjara.
Ao ireo trano fandraisam-bahiny, Agences de voyages/Tour-opérateurs, mpampanofa fiara, fa indrindra ny kaompaniam-pitaterana TSARADIA.
Mahatratra hatramin'ny 50% ny fihenam-bidy aroson'ireo mpikarakara fivahinianana ireo.
Tanjona ny hanome vahana ireo mpandraharaha ara-dalàna sy hampahafantatra an'ireo tolotra any amin'ny faritra samihafa.
mercredi, 11 novembre 2020 11:05
Fanabeazam-pirenena : Hisy fandraisana mpampianatra miisa 7500 ho mpiasam-panjakana
Miisa 7500 ireo mpampianatra horaisina ho mpiasam-panjakana amin’ity taona 2020, ary hitohy amin’ny taona 2021 izany, araka ny fanamafisana nataon’ny minisitry ny fanabeazam-pirenena Sahondrarimalala Marie Michelle, ny talata 10 novambra 2020.